Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Meheradda ugu Fiican iyo Hudheelada Spa ee Taipei, Taiwan
Qolka fadhiga ee Madaxtooyada ee Regent Taipei
Regent Taipei waxa uu helay saddex koob oo la qaddariyo oo ay siiyeen Abaalmarinnada Safarka Adduunka ee caanka ah iyo Abaalmarinta Isboortiga Adduunka. Regent Taipei waxa uu ku guulaystay laba Abaalmarinaha Safarka Adduunka,Hudheelka Ganacsiga ugu horreeya ee Taiwan 2021"Iyo"Hudheelka Hogaaminaya ee Taiwan 2021", iyo Regent Taipei's Wellspring Spa ayaa ku guuleystay"Abaalmarinnada Isboortiga Adduunka: Huteelka ugu Fiican Taiwan 2021” lix sano oo xiriir ah ilaa 2016.
Abaalmarinta Socdaalka Adduunka iyo Abaalmarinnada Isboortiga Adduunka waa qaar ka mid ah abaal-marinnada ugu sharafta iyo tartanka maadaama magacyadooda loo aqoonsaday inay yihiin astaanta ugu dambeysa ee heer-sare ee warshadaha. Abaalmarinta Socdaalka Adduunka waxaa la aasaasay 1993 si "loo aqoonsado, loo abaalmariyo oo loogu dabaaldego heerka ugu sarreeya dhammaan qaybaha muhiimka ah ee socdaalka, dalxiiska iyo warshadaha martigelinta". Natiijadu waxay daba socotaa raadinta dheer ee caajiska ah ee lagu raadinayo noocyada martigelinta ee ugu sarreeya adduunka iyadoo ay dhiibteen xirfadlayaasha warshadaha iyo dadweynaha, iyada oo musharraxa uu helay codadka ugu badan ee qaybta lagu magacaabay guusha. Regent Taipei waxay ku faanaysaa inay ku guulaysato "Hoteelka Ganacsiga Hogaamiye ee Taiwan 2021"maadaama uu Madaxtooyadu ku guulaysatay "Hotelka Hogaamineed ee Taiwan 2021".
Abaalmarinnada Isboortiga Adduunka waxa ay xustaa heerka ugu sarreeya ee isboortiga iyo warshadaha fayoqabka. Inaad awood u yeelatid inaad ku guulaysato abaal-marintan sharafta leh ee ka dhanka ah tartanka ba'an runtii waa hawl adag. Abaalmarinta Oscars of the Spa - World Spa Awards ayaa shaaca ka qaaday ku guuleystayaasha 2021; Regent Taipei's Wellspring Spa, oo leh daawaynta ugu sareysa iyo adeegga shan-xiddig, ayaa ku guuleystay "Taiwan's Best Hotel Spa" oo isku xigta lix sano tan iyo 2016. Abaalmarintan, Wellspring SPA ma aysan helin oo kaliya muuqaalka caalamiga ah ee Regent Taipei, laakiin sidoo kale Taiwan lafteeda - si adag u gelinaysa Taiwan goobta safarka caalamiga ah.
Regent Taipei wuxuu had iyo jeer si adag u aaminsan yahay "Keeno Taywan waxa ugu Wanaagsan Adduunka oo u keena tan ugu Wanaagsan Taiwan"; sidaas darteed, inkasta oo masiibada jirto, bixinta adeeg tayo sare leh iyada oo la hubinayo in dhammaan deegaan ammaan ah ay had iyo jeer ahayd mudnaanta koowaad. Intii lagu guda jiray masiibadaan, Regent Taipei waxay xoojisay tillaabooyinka ka hortagga faafitaanka iyadoo ku rakibtay tignoolajiyada jeermiska jeermiska ultraviolet, BioLED 365 Care, waxayna dhaqan gelisay tallaabooyin badan oo kale. Sebtembar 1-deedii, Regent Taipei iyo Just Sleep Ximen waxay heleen shaambada Safarka Badbaadada ah ee ay bixisay WTTC waxayna si rasmi ah xubin uga noqotay Silsiladda Adeegga Soo Dhawaynta Safarka Badbaadada ah ee MICE. Kooxda Silks Hotel ee hesha shaambada Safarka Badbaadada ah ee WTTC waxay muujineysaa dadaalkayaga joogtada ah ee aan ku galeyno caafimaadka iyo badbaadada martida safka hore inta lagu jiro aafo.
Ciwaanka Regent Taipei: No. 3, Ln. 39, Sek 2 ZhongShan N. Rd.